Gbasara anyị US - Xuzhou Sogood International Trading Co. Ltd.
Nabata na Sogood
Dịka ụlọ ọrụ ekesinyere aka nke ukwuu, anyị na-enye nnukwu iko iko dị iche iche, dịka nlekọta nke onwe, ihe ịchọ mma, ihe nsure ọkụ na-esi ísì ụtọ, nri na ihe ọ ,ụ ,ụ, nkwakọ ngwaahịa ọgwụ na ụlọ, maka ụlọ ọrụ mba dị iche iche na mpaghara, maka otu. otutu ihe eji eme ihe.
N'ime afọ iri gara aga, ọ tolitere bụrụ onye nrụpụta ọkachamara na onye ndu ụlọ ọrụ.
Factorylọ ọrụ anyị nwere ahịrị mmepụta 36 na akpaka, akara ntanetịaka 70, na-arụpụta ihe dị ka nde ngwaahịa abụọ kwa iko kwa ụbọchị. Anyị nwere ndị ọrụ karịrị narị ise, gụnyere ndị ọrụ ruru ogo iri abụọ na asatọ, ndị ọrụ nyocha mmadụ dị mma dị mmadụ iri na ise. A na-achịkwa njikwa ngwaahịa anyị nke ọma ma na-achịkwa oyi akwa.
Dị ka a nne na nna ụlọ ọrụ , e mepere ụlọ ọrụ anyị 2009 , nke raara onwe ya nye na ma ụlọ ahịa ma nke mba ọzọ ma toro ghọọ nnukwu ụlọ ọrụ na-emepụta ihe na mpaghara Jiangsu.
Oftụle ịzụ ahịa ahịa mba ofesi na-achọ, anyị guzobere ngalaba mbubata na mbupụ na ya 2019 , Xuzhou Sogood International Trading Co. Ltd , nke na etinye aka na mmepe ngwaahịa, na -emepụta ihe ọhụrụ ma na nhazi nke mbubata mbupụ.
N'ihe karịrị afọ 10 nke ahụmịhe dị elu dị na ịre ahịa na njikwa ogo, inwe ụlọ nkwakọba ihe karịrị puku mita abụọ na Xuzhou, nke na-ejide ọtụtụ nde ngwaahịa dị, na-egbo mkpa ndị ahịa.